Ny birao fizahan-tany Anguilla dia mampiseho akanjo mahavariana ho an'ny Fetiben'ny fahavaratra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny birao fizahan-tany Anguilla dia mampiseho akanjo mahavariana ho an'ny Fetiben'ny fahavaratra
TALOHALANA EXTRAORDINARY Troupe
* Ny Grand Parade of the Troupes dia Mitranga Zoma 9 Aogositra*
Anguilla dia nankafy ny vanim-potoanan'ny ririnina 2019 nahavariana niaraka tamin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany marobe, ary mba hitohizany izany, Anguilla dia manome antony matanjaka kokoa ny mpitsidika hitsidika io toerana mahavariana io. Fetiben'ny fahavaratra Anguilla dia fihoaram-pefy ara-kolotsaina amin'ny hetsika karnavaly amin'ny alina, ary hazakazaka an-tsambo, fety amoron-dranomasina, kaonseritra ary dihy an-dalambe nony andro. Ny fankalazana folo andro nanomboka ny 3 - 11 aogositra 2019 dia manamarika fomba fanao efa-polo taona an'ny Beach, Boats ary Bacchanal izay mandray ny nosy Anguilla isaky ny Aogositra.
Mampiavaka ny Fetiben'ny fahavaratra dia ny Grand Parade an'ny andiany, ny zoma 9 aogositrath, fisehoana akanjo mahafinaritra be dia be rehefa mihaona manodidina ny renivohitra, The Valley, ny mpamorona, mamorona kaleidoscope miloko. Amin'ity taona ity ny mpitsidika sy ny mponina dia asaina hisafidy sy hividy ny fitafiany an-tserasera, hanangona azy ireo any amin'ny nosy, ary hiditra amin'ny Grand Parade manomboka amin'ny 11:30 maraina.
Ny Anguilla Tourist Board (ATB) dia namorona akanjo manokana, mitondra ny lohateny hoe "Rainbow City", izay ny lokony dia hita taratra amin'ny vahoakan'i Anguilla, zavatra niainany, zavamaniry, biby ary kolontsaina mivelatra. Ny andry maro amin'ny traikefa "Rainbow City" dia aseho amin'ny fizarana Anguillian telo miavaka - variana, Hanami ary Enchanted.
variana hita taratra ny toe-tsain'ny Anguilla. Ao amin'ny sehatry ny Rainbow City, ny Cerise Solstice dia manamarika ny vanim-potoana ahatongavan'ny Sun amin'ny toerana avo indrindra, mampiseho ny hatsarana sy ny hafanam-po feno hita taratra amin'ny Fetiben'ny Masoandro niainan'i Mas.
Hanami manamafy ny tanjaka sy ny reharehan'ny vahoaka Rainbow City. Ny loko verily dia maneho ny fahaizan'ny Anguillians, izay nosedraina sy notsapaina tamin'ny fanamby henjana indrindra amin'ny fiainana. Io faharetana io no namela an'i Anguilla handresy ny vato misakana rehetra.
Enchanted midika ny tanjaka, ny fahefana ary ny fanjakan'ny vahoaka. Rehefa milentika ihany ny masoandro amin'ny fahavaratra, manazava ny habakabaka amin'ny loko mavo sy volomparasy mamirapiratra, mijanona kely izahay handinika ny hakanton'ny lanitra amin'ny hariva.
Ny Alatsinainy Aogositra amin'ny Fetiben'ny fahavaratra (Alatsinainy voalohany amin'ny volana Aogositra, ankalazaina amin'ny maha Andro Fanafahana) dia manomboka amin'ny J'ouvert maraina Sunrise Street Jam ny Aogositra 5th, fampisehoana ho an'ny talenta mpitendry zavakanto sy mpanakanto ao an-toerana izay mifaninana amin'ny fiadiana ny tompondakan'i 'Road March Champion'. Avy eo dia tonga ny alatsinainy aogositra mahafinaritra Antoko Beach Caribbean miaraka amin'ireo mpanakanto eo an-toerana sy iraisam-pirenena manadino ny sehatra mandritra ny 12 ora fety amin'ny fety Sandy Ground. Ny fampifangaroana ny fitohanan'ny arabe sy ny fety amoron-dranomasina dia mitovy amin'ny feon'ny 24 ora izay mahasarika olona an'arivony maro mankao amin'ilay nosy.
Notondroina ho fetezan'ny andro farany an'i Anguilla, Mora ny maso amin'ny 8 Aogositra dia fampisongadinana hafa amin'ny Fetiben'ny fahavaratra. Ity fety mahaliana sy vao maraina amoron-dranomasina ity ao amin'ny Sandy Ground dia misy mpanakanto malaza isam-paritra sy iraisam-pirenena.
Ny Poker Run - voalahatra amin'ity taona ity ho an'ny 10 Aogositra - dia hetsika mahafinaritra mandritra ny andro mandritra ny andro, izay manintona sambo 100. Misy fijanonana 4 eo anelanelan'ny fanombohana sy ny fiafarany - Da Vida's, Island Harbor, Rendezvous Bay ary Meads Bay. Isaky ny fijanonana dia misy fety amoron-dranomasina, ary lalao sy fifaninanana marobe - fifaninanana fisotro labiera, fifaninanana dihy, lalao, mozika ary sakafo maro be. Ny tànana poker mpandresy dia mahazo $ 5,000 XNUMX $ - fa ny tena zava-dehibe dia ny fotoana lanin'ny rehetra!
Tsy misy fankalazana Anguillian feno raha tsy misy ny fanatanjahantena nasionaly sy ny fialam-boly, ny hazakazaka sambo. Hetsika maromaro no tanterahina mandritra ny Fetiben'ny fahavaratra, ary miafara amin'ny Tompondakan'ny tompon-daka Hazakazaka amin'ny 11 Aogositra, manamarika ny faran'ny ofisialin'ny kalandrie fifaninanana sambo mandritra ny taona, ary manome ny zon'ny fieboeboana mandresy amin'ny vanim-potoana manaraka.
Misy fandaharam-potoana feno momba ny hetsika mandritra ny fahavaratra amin'ny tranokala ATB ao amin'ny https://festivals.ivisitanguilla.com/. Eto ny mpitsidika sy ny mponina dia afaka manafatra sy mividy ny fitafiany, mamandrika fonosana fahavaratra manokana, mandamina trano fandraisam-bahiny na fiara, ary mandrafitra ny antsipiriany rehetra amin'ny traikefa Anguilla Summer Festival.
Raha mila fanazavana momba an'i Anguilla dia tsidiho azafady ny tranokala ofisialin'ny Anguilla Tourist Board: www.IvisitAnguilla.com; araho izahay amin'ny Facebook: Facebook.com/AnguillaOfficial; Instagram: @Anguilla_Tourism; Twitter: @Anguilla_Trsm, Hashtag: #MyAnguilla.
IATA: Mitohy ny fironana 2019 ratsy ny fitakiana entana
Crestline Hotels & Resorts dia manonona ny filoha lefitra mpanatanteraka vaovao, CFO & CIO